Ngathi | I-Shijiazhuang QiAOQi Imveliso yeGlasi Co, Ltd.
Shijiazhuang Qiaoqi Glass Product Co., Ltd. ibekwe e Shijiazhuang City, Hebei kwiPhondo China.
Siyinkampani yokuthumela ngaphandle enobuchwephesha enomzi mveliso wayo, kwaye sineqela lobuchule elijongene nentengiselwano yokuthumela ngaphandle.
Singayamkela INKQUBO YOKUZIPHATHA kwaye sivelise njenge logo yoyilo kunye nebhokisi yombala. Kwangelo xesha, unokufumana eyona nkonzo iphambili yokuthengisa kunye nasemva kwentengiso. Umgaqo wethu 'ngumgangatho omnandi kunye nexabiso elimnandi kunye nenkonzo emnandi'.
QiAOQi Umenzi uthatha umgangatho njengezinto ezisisiseko kuphuhliso lwamashishini. Ukusukela ekuqhubekekeni kwemathiriyeli yethu ekrwada ukuya ekugqityweni kwemveliso yokugqibela, sizibophelele kumgangatho, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nomnqweno wokudlula ngaphaya kweemfuno zabathengi. Sineenkqubo ezingqongqo zolawulo lomgangatho, zonke iimveliso ziya kutshekishwa ngononophelo ubuncinci amaxesha ama-3 (ngexesha lokuvelisa, imveliso egqityiweyo nangaphambi kokuba ilayishwe yi-QC) esenza ukuba sikwazi ukuqinisekisa ulwaneliseko lwabathengi. Okwangoku, sigcina senza ingxelo kubathengi ngexesha elisenza sikwazi ukuqinisekisa ukoneliseka kwabathengi.
Ulawulo lweNdawo yokugcina
Umenzi weQiAOQi unendawo yokugcina impahla engaphezu kwe-5,000 sqm kwimpahla yesitokhwe. Abasebenzi bethu bokugcina iimpahla abagcini ngokucoceka, jonga inani, kodwa baqinisekise nokupakishwa. Ngaphandle koko, zonke iimpahla zempahla ngokulandelelana ngokweeodolo ezahlukeneyo. Kukusukela kwethu rhoqo ukwenza iimveliso ezisemgangathweni ophezulu.
Ezele kukuKhuthazeka kunye neQela leNtengiso yeQela lokuThengisa
Amandla amancinci kunye neqela lokuthengisa elisebenzayo elisebenza i-7X24hours, elinokunika ingxelo ngexesha elifanelekileyo nangokuchanekileyo.
Ukuba umtsha kolu shishino, siza kukunika elona cebiso lobuchule kwimveliso.
Ukuba uchwepheshe kolu shishino, siza kukunika ixabiso elikhuphisanayo kunye nexesha elifanelekileyo lokuhambisa.
Abasebenzi beQiAOQi bajonge ukujoyina izandla kunye nawe ukwenza ikamva eliqaqambileyo ngobulumko, isimilo kunye nemveliso yethu.